Zidane oo u digay Barcelona… (Real Madrid waa mid caadeysatay inay ku guuleysato Koobab) – Gool FM
(Madrid) 21 Maajo 2020. Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in Los Blancos ay dooneyso in guulo ay ku dhameysato xilli ciyaareedkan, isagoo dhinaca kale tilmaamay in kooxda cad cadka ah ay caadeysatay ku guuleysiga koobab.
Zinedine Zidane ayaa hogaaminayay tababarka kooxda isbuucaan, waxayna ciyaartoy badan ee kooxda ah ay ku guuleysteen inay dib ugu soo laabtaan tababarka guud.
Maamulka horyaalka Spain uu hoggaaminayo Javier Tebas ayaa rajeynaya in Horyaalka La Liga uu markale soo laabto 12-ka bisha June ee soo aadan, waxayna u muuqataa in Real Madrid ay diyaar u tahay inay soo laabato, isla markaana ay Barcelona kula dagaalanto ku guuleysiga horyaalka La Liga.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa wareysi uu ku bixinayey shabakada rasmiga ah ee kooxda Real Madrid, wuxuu ku sheegay:
“Toddobaadkan aad ayuu u fiicnaa, maxaa yeelay waxaan wax badan ka qaban karnaa kooxo yar, waxaan sameyn karnaa tababaro dheeri ah ee xagga taatikada iyo jirka ah.”
“Waxay u muuqataa in kooxdu ay wanaagsan tahay toddobaadkan, Isbuuca soo socdana aad ayey uga fiicnaan doonaan.”
“Waa inaan si macquul ah uga fikirnaa sababtoo ah nasiib ayaan u yeelanay inaan shaqada ku soo laabano, oo aan halkaan joogno, waana tan aniga ila wanaagsan.”
“Waxaan heysanaa 11 kulan oo horyaalka ah, waxaanan isku diyaarin doonnaa inaan si wanaagsan ugu dhameysanno xilli ciyaareedka, ugu dambeyntii, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan wax walba bixino, si aan wax uun ugu guuleysano dhamaadka xilli ciyaareedka, sidaa darteed ku guuleysiga koobab, waa DNA-ga Real Madrid”.